INKOSI ITHI IZOQHUBEKA EZINYATHELWENI ZIKAYISE - Ilanga News
Home Izindaba INKOSI ITHI IZOQHUBEKA EZINYATHELWENI ZIKAYISE
INKOSI ITHI IZOQHUBEKA EZINYATHELWENI ZIKAYISE
INKOSI Ngqalabutho Dlamini yabekwa ngokusemthethweni njengenkosi yaseNhlangwini ngoZibandlela.
IZIMISELE ngokugqugquzela inhlonipho nemfundo inkosi yaseNhlangwini, eHighflats, uNgqalabutho Sizwe Dlamini (33), ebekwe kulesi sikhundla ngoZibandlela (December) wonyaka odlule emuva kokukhothama kukayise, iNkosi Melizwe Dlamini ngoNdasa (March) nyakenye.
Engxoxweni neLANGA, iNkosi Dlamini ithe ifisa ukuthuthukisa iNhlangwini ngokukhuthaza osomabhizinisi abahlukene ukuyovula amathuba emisebenzi kule ndawo. Ikhuthaza intsha engaphansi kobukhosi bayo ukuba iyihambele imihlangano yesizwe ukuze nayo ibe nezwi.
“Njalo ngoLwesithathu kuhlala umkhandlu wobukhosi lapho sidingida khona izindaba zesizwe. Ngifisa intsha yaseNhlangwini ingahambeli kude nale mihlangano ngoba nami njengomuntu omusha, ngiyafisa ukuzwa imibono yayo nokuthi isizwe singaya kanjani phambili. “Isikhathi esiphila kusona sishintshe kakhulu, intsha yiyona eyikusasa lesizwe.
“Uvo lwayo lubalulekile kimina,” kusho yona. INkosi Dlamini yize isebenze kakhulu noyise, kodwa ithi isazama ukujwayela ukuba sesihlalwe ni, ilekelelwa yikomidi labeluleki eyaliqoka emuva kokubekwa kwayo ngokusemthethweni wuMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal. INkosi Dlamini yaqeda umatikuletsheni ePhikwase High School, KwaCeza ngo-2009, yalibangisa e-University of KwaZulu-Natal, (UKZN), iyokwenza iziqu zeCultural and Haritage Tourism. Kumanje imatasa nokuphuthola iDegree yePublic Administration, eMancosa. Ithi lezi zifundo zizoyilekelela ekuqondeni imithetho kahulumeni ngokuphathwa kwabantu nokwenziwa kwezinto ngendlela endlini yobukhosi. “Imfundo ibaluleke kakhulu kulesi sikhathi esiphila kusona. Ubaba wayeyithanda imfundo namabhizinisi, okuyinto engizoqhubeka nayo.
“Kulula nokugqugquzela intsha ngemfundo uma nawe uzimisele ngayo,” kusho yona. INkosi Dlamini ithi uyise wayeyazisa inhlonipho, nayo ngeke ikufake ekhanda ukuthi isiyinkosi, izoqhubeka nokuhlonipha abantu abadala nabasezikhundleni ezithile endlini yobukhosi.
“Ngingaba yinkosi kodwake kunabantu abadala kakhulu kunami; omama, abafowethu, obaba, odadewethu nesizwe sonkana. Kumele ngihambe ngenhlonipho phambi kwabo,” kusho yena. Yize isibekiwe ngokusemthethweni, kodwa kusazoba nomcimbi omkhulu wokuhlanganisa isizwe ukujabulela ukugcotshwa kwayo. INkosi Dlamini ithi ngaphambi kokuthatha isihlalo, ibisemabhizinisini ezokuthutha nabangane eyayifunda nabo enyuvesi. Itshele ILANGA ukuthi isazoqhubeka namabhizinisi ngoba ikholwa wukuthi ubukhosi kumele bube nezindlela zokungenisa imali, buvule amathuba emisebenzi. Okwamanje inkosi kayikashadelwa, kodwa ihlebele ILANGA ukuthi ngeke uphele lo nyaka engekho undlunkulu.
Previous articleIzwi likaWinnie Mahlangu lanika abesifazane izwi kuleli
Next articleWelulele isikole isandla uVVO